Design - Shenzhen King Fu Color Ukuphrinta Co., Ltd
Uma kusethwa ifayela lakho kukhona izindawo ezintathu ezibalulekile okufanele sihlale sizikhumbula:
Endaweni Nquma: Lona Usayizi wekhasi ngombala. Kuyinto ubukhulu ukuthi ibhuku lakho eseqedile uzobe ukusikiwa ukuba, ukuphakama futhi ubude ikhasi.
Bleed: Lena indawo efinyelela NGALÉ emgqeni ngombala. Uma une ingemuva, imifanekiso noma iyiphi isici design ofuna opha kwekhasi, kumele ukunweba lokhu ngokuhlela 1/8 "(3 mm) ngale amamaki ngombala.
Endaweni ephephile: Gcina umbhalo amabhokisi izihloko eziqukethwe indawo ephephile, elisemnyango ubuncane 1/8 "(3 mm) kusukela endaweni ngombala.
Umqondisi womshini umisa emakhasini onikezwe ishidi, ngakho-ke kubalulekile ukuthi usethe kuchitheka igazi nxazonke 4 kwekhasi.
Ukuze uthole imiphumela emihle amaphrofayli ngokweqa kudingeka bonyana asetjenziswe izithombe ku-Photoshop, hhayi InDesign:
Lapho ulungiselela amafayela isithombe sakho ku-Photoshop, ukhethe kusukela Hlela / Inguqulela Profile bese ukhetha okukodwa kokulandelayo kusukela imenyu eyehlayo:
• Ukuze GRACoL , i-Adobe iphrofayli: camera GRACoL 2006 (ISO 12647-2: 2004)
• Ukuze FOGRA camera, i-Adobe iphrofayli: camera FOGRA39 (ISO 12647-2: 2004)
• Ukuze FOGRA uncoated, i-Adobe iphrofayli: Uncoated FOGRA47 (ISO 12647-2: 2004 )
Buyekeza imihlahlandlela kulesi sigaba ukuze alungiselele amafayela akho ngokunembe ngangokunokwenzeka. Lokhu kuzosiza ukuba ugweme amaphutha ngesikhathi preflight. Uma ungaqiniseki ukuthi amafayela akho asethwe kahle sicela uxhumane nommeleli wakho esinegunya iseluleko.
Isicelo Amafayela eyamukelwe:
• I-Adobe InDesign
• Adobe Illustrator (. Hhayi efanelekayo isakhiwo ingaphakathi Sicela ukhawule agudle ubuciko ekhasini elilodwa amadokhumenti, efana amalogo, jackets, njll)
• Phrinta PDF ngomumo idaliwe kusuka amafayela isicelo ebhalwe ngenhla ngokusekelwe eBhayibhelini
Ifonti Guide Lines
Sincoma ukuthi usebenzise Postscript, OpenType noma TrueType amafonti. Amanye amafonti onakele ngesikhathi sokudlulisa, ezifana evuthayo ku-DVD noma ukulayisha nge-FTP. Sincoma ukugxisha amafonti ngaphambi kokuthumela kubo.
Ungadali amafonti ukuthi ungenalo elihambisana iphrinta wefonti. Ngokwesibonelo, ohlelweni lwakho isakhiwo ungakhetha "Helvetica" bese uchofoza "Bold" isitayela ngoba kukhona esihambelanayo 'Helvetica Bold "iphrinta wefonti. Kodwa uma ukhetha "Futura Heavy" bese sisebenzise "Bold" isitayela kuso ngeke uthole inguqulo nesibindi sokushumayela kwalowo ifonti ngoba akukho okuhambisanayo iphrinta wefonti.
Sincoma ukuthi ukhethe font ofuna ngokuqondile kumenyu ifonti kunokuba ngokukhetha base ifonti nokusebenzisa isitayela. Onamafonti amakhulu aqukethe izinsimbi eziningi inqubo yokugcina ingase yenze imiphumela yakho ezingalindelekile.
Uma kusethwa up umbala wakho ifonti, sicela ugcine lezi zinkombandlela engqondweni:
8 pt. at 100% we umbala esiqinile.
12 pt. 60% kuya ku-80% umbala
16 pt. ngesikhathi CMYK umbala. Okuncane CMYK ifonti azophrinta ne imiphetho jagged futhi avele (irejista noma ukuvala) usongene ngoba amachashazi kunyatheliswa njengoba kwesikrini.
Ukudoba udlulisela umfanekiso noma isithombe 0.25pt ukugwema noma iyiphi halo omhlophe noma igebe emhlabeni isithombe noma kube ingcaca. Ngokuvamile inqubo imibala akudingeki abanjwe, nakuba kukhona okuthile okuhlukile. InDesign uye preset setting isicupho, ngokuvamile awudingi ukuba sikhathazeke ngokuthi ukudoba.
Kufanele uyazi ukudoba uma engqongqoza aphume isithombe noma umklamo isici kusuka ngaphansi kwesisekelo esiqinile. Kunezindlela ezimbili ugweme halo omhlophe, noma lokho okubonakala kuwukugula okungasho misregistration, ngokusebenzisa ukudoba efanele noma overprinting. Overprinting Kunconywa umbhalo noma mncane ihluzo noma imigqa, kodwa khumbula ukuthi overprinting izokwengeza umbala ayabelwe into umbala umsuka kungathinta umbala into.
Uma une umbhalo oluhlaza (c: 95, m: 0, y: 80, k: 0) ehlezi okwesibhakabhaka (c: 95, m: 20, y: 10, k: 0) ngemuva, ngeke kudingeka isicupho ngenxa okuqinile ikhayeni isizinda FUTHI uma umbhalo kuba 16 pt. noma ezincane kufanele usethe umbhalo OVERPRINT.
Hi res amafayela wesithombe ngaso sonke isikhathi kufanele zithunyelwe njengoba TIFF, PSD, AI noma EPS amafayela. Isici esibaluleke kakhulu kabusha izinga kuyinto usayizi wefayela sokugcina. Wonke amafayela Isithombe kufanele sikwazi 300 DPI (amachashazi intshi ngayinye) futhi umugqa art kufanele kube 1200 DPI ngosayizi sokugcina.
Isithombe esikhulu ukuskenwa at 150 DPI kusebenzeka okulingana isithombe isigamu ukuthi usayizi ukuthi ukuskenwa at 300 DPI. Bobabili kuzoholela ifayela icishe ilingane.
Lapho ulungiselela amafayela isithombe sakho udinga wasithatha isilinganiso esifanele ulwazi. Uma amafayela akho mancane kakhulu avele ukufiphala noma Pixelated. Uma makhulu kakhulu benza umsebenzi imagesetter kanzima kakhulu noma kungenzeka ukukhiqiza iphutha Isidlulisilwazi.
Izithombe esingaphansi 300 DPI (noma 1200 DPI elayinini art) kuzokwenza nephutha phakathi kwenqubo preflight. Zonke izithombe kucaca okuphezulu kumele usethe njengoba CMYK, futhi engekho ngaphezulu kuka + 15% noma -15% we ubukhulu ukukhiqizwa kabusha. Umsebenzi wobuciko kulayishiwe kusuka ingosi ye-Internet ngokuvamile kakhulu ephansi isixazululo print ukukhiqizwa kabusha. Gwema ukusebenzisa imigqa phakathi nezithombe kukhona ohlabayo kuka .5 iphuzu.
Zonke izithombe kufanele zithunyelwe njengoba CMYK, hhayi RGB format. Zonke umbala kufanele retouched nombala ukulungiswa ku-Photoshop ngaphambi izithombe bafakiwe ku InDesign.
Raster noma bitmap izithombe eziqukethwe uhlobo izikwele ezincane igridi like iphethini, ezaziwa ngokuthi ama-pixel, ukumela ihluzo. Ngamunye pixel umfanekiso bitmap has a othize indawo kanye lombala eyabelwe yona. Okuvame kakhulu uhlobo lwefayela kukhona TIFF, EPS noma amafayela Photoshop PSD.
Lapho ulungiselela amafayela isithombe print ukukhiqizwa kabusha kufanele cishe njalo iveze imifanekiso TIFF noma amafayela PSD. amafayela TIFF ijwayeleke kakhulu, futhi ifomethi evulekile, okusho ukuthi ingasetshenziswa InDesign noma Quark. amafayela PSD ingasetshenziswa kuphela ohlelweni lwe-Adobe Photoshop.
Elinye ifayela ezivamile sithombe-JPEG. Ngokuyinhloko esetshenziselwa izithombe, JPEG ingenye ifomethi ezimbili ezivamile ifayela esetshenziswa kuwebhu. Kuyinto format onomfutho ngakho Imininingwane elahlekile ngesikhathi kokucindezelwa. Uma une ifayela JPEG ufuna ukusebenzisa lwembhalo, usivule Photoshop bese ukhetha: Image-> mode-> CMYK Umbala (noma ukwenza mhlophe).
Kuyinto kulungile resample kusuka sithombe esikhulu kumuntu ezincane. Photoshop umane Ufaka out pixels owengeziwe futhi isithombe izovela ezincane futhi zonke bit ubukhali njengenkemba kwaba ngaphambi.
Kuyinto kube ngumcondvo lomuhle ukuba upsample kusuka sithombe esincane ukuze esikhudlwana. Kulesi simo, Photoshop unezela Amaphikseli kwesithombe. Uhlelo esabela umbala kulezi Amaphikseli entsha esekelwe umbala Amaphikseli angomakhelwane. Lokhu kungaholela isithombe blurrier ngaphandle yokuqala, njengoba kuboniswa ngakwesokudla.
Ungalokothi uhambise i-GIF amafayela wesithombe ekukhiqizeni ukuphrinta.
Izithombe Black and White
Kuye iphrojekthi yakho, ungasetha izithombe zakho njengoba 1 umbala omnyama nomhlophe, duotones, noma 4 umbala CMYK izithombe.
1 umbala isithombe omnyama nomhlophe isethiwe ngokuvamile besebenzisa inqubo abamnyama. Highlights nezithunzi asethwe e mhlophe.
2 umbala omnyama nomhlophe isithombe asethwe usebenzisa inqubo omnyama umbala PMS. PMS umbala ingasetshenziswa ukusebenzisa umbala sepia noma PMS grey ukudala imininingwane eyengeziwe kule avelele grayscalefrom ukuba izithunzi.
4 umbala omnyama nomhlophe zidalwe kusetshenziswa CMYK futhi uhlinzeke ngemininingwane kakhulu kusuka kokubekwe obala ukuze izithunzi. 4 izithombe omnyama nomhlophe umbala zidinga ukulinganisela ibuthaka. Uma kusethwa amakhophi amafayela akho, kufanele uqiniseke ukuthi akukho umbala waphonsa kuzithombe zakho. Kumele kuqedwe sokusakaza Photoshop phambi isithombe ingeniswe ku InDesign.
Lokukhipha wonke amafayela vector umfanekiso njengoba EPS noma AI (Illustrator). Qiniseka ukufanisa amagama imibala in la mafayela amagama imibala efanayo e-software sakhiwo.
Ezinye izinguqulo-Adobe Illustrator zikuvumela ukuba sikhuphule noma sehlise-Adobe Illustrator yokuzenzakalelayo komphumela. Musa ukulungisa lokhu kulungiselelwa. Wehlise isinqumo kuzoholela izindlela kahle kwakhiwa. Ukukhulisa kungase ukunikeza amaphutha ezingadingekile phakathi preflight.
Londoloza umugqa art amafayela nezithombe bitmapped. Uma abasindise uFiphazo, emaphethelweni kungase okukhipha nge screen halftone abenze avele ukufiphala noma jagged.
Ukusebenzisa Black Ink ukudla okuqinile
Uma endaweni enkulu emnyama okuqinile uzobe ukweqa ezinye tints eyakhelwe, kuzoba khona umehluko kwabantu phakathi izindawo phezu umbala nalabo ukuthi akuzona phezu umbala. Isisombululo ukwakha "ocebile abamnyama" tint ukuxubana kanje:
Ukusebenzisa le black ocebile uyogwema iyiphi sobala ukuminyana ukuhlukahluka ukudla okuqinile abamnyama. Libuye libe ifomula ezinhle ngokukhiqiza obukhulu, iyunifomu black okuqinile, ngisho nalapho ngeke ukweqa eminye imibala.
Okunye izakhi abamnyama ezifana imithetho, uhlobo, futhi izakhi umfanekiso mncane kufanele yakhiwa 100% omnyama isethwe ku overprint.
Ketha ukuvenisha emakhasini abaqinile umbala omnyama ebhekene ikhasi elimhlophe ukuvimbela yahamba.
Ngaphambi kokuthumela amafayela akho, sicela usebenzise umyalo Preflight e InDesign ukuhlola amafayela akho.
• kuphela izithombe ezisetshenziswa kusakhiwo. Qiniseka ukuthi amagama nezindawo amafayela exhumene musa ukushintsha ngemuva kokuthi ukuqoqa amafayela akho.
• Zonke bitmapped osayizi bezithombe kufanele okungenani 300 DPI, futhi zonke art amafayela vector umugqa kufanele okungenani 1200 DPI
• TIFF kanye EPS amafayela kufanele kube CMYK, hhayi RGB. Zonke izithombe njengoba TIFF, futhi zonke art Vector umugqa njengoba EPS.
• Faka wonke amafonti esetshenziswa, kanye okuhambisanayo iphrinta amafonti zabo, ngisho noma ifonti avame ukusetshenziswa.
• Susa zonke imibala ubuningi. InDesign sika umbala Palette has a "Khetha Konke Ubuningi" inketho kuzokusiza ukuthola futhi ususe lezi swatches.
• Qinisekisa umbala ngamunye unegama elilodwa kuphela.
• Cacisa ihluzo ukusebenzisa inombolo ubuncane izinyathelo ezixubile noma inombolo encane kunazo zonke amaphuzu endleleni.
• Yenza imibhalo Photoshop uqinisekile ungafaki izingqimba ubuningi noma kufihlwe. Kungenjalo, amaphutha ukudabuka kungenzeka futhi izingqimba kufihlwe kungase okukhipha futhi udale nemiphumela engalindelekile.
• Ukuphungula izakhi ubuningi phezu pasteboard noma izakhi ukuthi kufihlwe ngokuphelele ezinye izinto.
• Wonke amakhasi kufanele abe okunqanyuliwe futhi kuchitheka igazi (kuchitheka igazi kufanele luhlanganise 3mm noma 1/4 'ngaphesheya ngombala nxazonke 4).
• Faka ongaphakeme res PDF for ukubekwa kanye / noma laser okuprintiwe. Bhala izinombolo zekhasi ku lasers uma amaphepha musa uzitholele noma ongaphakeme res PDF for ukubekwa.
• Faka isicelo noma we-PDF ahlukene amafayela umbhalo kanye nekhava, icala iyiphi enye yezingxenye (endpapers, wokuhlanganisa izincwadi njll)
• Umbala isiqondiso, uma lokuveza.
Ungahambisa amafayela akho nge wetransfer, Hightail noma ezinye Uhlelo ukwabelana amafayela ku-intanethi, noma drive ephathekayo (uqiniseke ukuthi ufaka phakathi ikhebula axhume kukhompyutha). Hambisa InDesing noma kucaca okuphezulu uzitholele PDF ngomumo nge izimpawu ngombala bese kuchitheka igazi kuhlanganisiwe.
Ukuze uthole imininingwane eyengeziwe mayelana nendlela usethe PDF, sicela uvakashele i-Adobe usizo indawo: https://helpx.adobe.com/indesign/how-to/indesign-create-pdf-for-print.html?set=indesign-get -started-ebalulekile-Wabasaqalayo